Nezvedu - Changzhou Pharmaceutical Factory
Yakagadzwa mugore 1949
CHANGZHOU PHARMACEUTICAL FEKITI (CPF)
Zvinodhaka Zvekutsvagisa Institute
Kugadzira kugadzirwa kwemvumo
Pagore avhareji kugona kugona kwekugadzirira
Mbishi zvinhu chinzvimbo
Mhando dzakasiyana dzekugadzira mashopu
Changzhou Pharmaceutical Factory (CPF) inotungamira mishonga inogadzira maAPI, akapedza mafomu kuChina, ayo ari muChangzhou, mudunhu reJiangsu. CPF yakatangwa muna 1949. Inovhara nzvimbo inosvika mazana matatu emamirioni uye inoshandisa matanda anokwana chiuru nemazana mashanu nemakumi mashanu, kusanganisira vanopfuura mazana matatu vehunyanzvi vane hunyanzvi hwakasiyana. Inosanganisirwa mukugadzira zvemwoyo mishonga uye mishonga, gore rega rega kuburitswa kwemarudzi makumi matatu emaAPIs kunopfuura matani 3000 uye emhando zana nemakumi matanhatu emhando dzakapedzwa mapiritsi anopfuura mamirioni zviuru zvisere.
Cardiovascular Medicine Nyanzvi Fekitori
Yegore R & D yekudyara maakaunzi egore rekutengesa mari
API nyika dzekunze nematunhu
Miriyoni yuan gadziriro dzakatumirwa kumusika weUS
Vakasiyana mazita ekuremekedza nenyika, dunhu, guta nemaindasitiri
CPF ine mbiri dzakabatsirika zvizere: Changzhou Wuxin naNantong Chanyoo. Uye Nantong Chanyoo akabvumawo kuongororwa kweUSFDA, EUGMP, PMDA neCFDA. CPF zvakare ine 1 Institute of Pharmacology.
Iyo fekitori inoita manejimendi uye kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa neGMP. Zvigadzirwa zvinotumirwa kunze kwenyika dzinopfuura makumi mashanu. Iyo fekitori yakatenderwa neUS FDA odhita kwenguva gumi neshanu, uye zvakare yakatenderwa neEUGMP, PMDA, CGMP kuongororwa, uye zvakare nemakambani mazhinji anozivikanwa evatengi pasi rese. Uye isu takashandawo naNovartis, Sanofi, GSK, Merck, Roche, Pfizer, TEVA, Apotex, uye Sun Pharma.
CPF yakagamuchira 50+ maNational kana maProvince brand uye mibairo, senge: "Wepamusoro zana emabhizimusi emabhizimusi muChina", "China AAA level kiredhiti kambani", "National yakanakisa API kutumira kunze brand", "China Hi-Tech bhizinesi" uye nezvimwe. .